ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သားသမီးရတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ကျွေးမွေးသင့်လဲ ??? - Chit MayMay
Home Child Nutrition ဥာဏ်ကောင်းတဲ့သားသမီးရတနာလေးတွေဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ကျွေးမွေးသင့်လဲ ???
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရတနာတွေကို ဥာဏ်ကောင်းပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်စေချင်တာက မိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါ။ အချို့ သားသားမီးမီးလေးတွေက မွေးရာပါထူးချွန်ထက်မြက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမယ့် အချို့ကတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်က ငယ်ရွယ်စဥ်တည်းကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံစရိုက်တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတာကြောင့် သားသားမီးမီးလေးတို့ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်ဖို့အတွက် မေမေတို့က ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေ ကျွေးမွေးသင့်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အချို့ကလေးတွေက နွားနို့လုံးဝမကြိုက်ကြဘဲ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်း အိမ်ကရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဆိုဒါ၊ ကိုလာ နဲ့ အခြားအချိုရည်မျိုးစုံကို ရရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နွားနို့က ကလေးငယ်တွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အင်မတန်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်ပြီး နွားနို့ကနေ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်ဒီနဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သားသားမီးမီးတွေမှာသာ နွားနို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလက်ဂျစ်မရှိဘူးဆိုရင် နွားနို့ကို စနစ်တကျနဲ့တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်အပေါ်လိုက်ပြီး တစ်ရက်ကို နွားနို့ (၂) ခွက်ကနေ (၄) ခွက်အထိ တိုက်ကျွေးသင့်တယ်လို့ သိရပြီး အသက် (၂) နှစ်အောက် သားသားမီးမီးတို့ကိုတော့ အဆီပါဝင်မှုနည်းပါးတဲ့ နွားနို့ကိုသာ တိုက်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
အခြားသောအသီးတွေလိုမျိုးပဲ ပန်းသီးက သားသားမီးမီးတို့အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အဆာပြေမုန့်အဖြစ်၊ သစ်သီးအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အရည်ရွှမ်းပြီး အရသာကလည်း ချိုမြိန်တာကြောင့် ပန်းသီးမကြိုက်တဲ့ကလေးဆိုတာ ရှားပါတယ်။ ပန်းသီးကနေ ဗီတာမင်စီဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပြီး ကယ်လိုရီပါဝင်မှုလည်း နည်းပါးတဲ့အပြင် အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းလည်း များပြားတာကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ကို သေချာပေါက်ကျွေးသင့်တဲ့ အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မေမေတို့ ကျူးလွန်မိနေတဲ့ အမှားအယွင်းတစ်ခုက သားသားမီးမီးတို့ကို ပန်းသီးကျွေးတဲ့အခါ အခွံခွာကျွေးတာမျိုး၊ ပန်းသီးဖျော်ရည်လုပ်ပြီးတိုက်တာမျိုးပါပဲ။ ပန်းသီးကိုအခွံခွာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပန်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်က နည်းသွားပြီး ဖျော်ရည်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သကြားဓာတ်နဲ့ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနှုန်းက ပိုမိုများပြားသွားနိုင်တာကို သတိပြုရမှာပါ။
မေမေတို့အများစုက သားသားမီးမီးတို့ကို ထောပတ်မြေပဲမှာ အဆီပါဝင်မှုများတယ်၊ သားသားမီးမီးတို့ အဝလွန်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး မကျွေးဘဲနေတတ်ကြပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ထောပတ်မြေပဲက အဆီပါဝင်မှုနှုန်းထင်သလောက် မများပြားဘဲ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် B6၊ ဗီတာမင်အီး၊ ဗီတာမင်အေ၊ သံဓာတ်နဲ့ ဖောလစ်အက်ဆစ်တို့ ပါဝင်တာကြောင့် ပရိုတိန်းဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒိန်ချဥ်ကလည်း သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး အထူးသဖြင့် နွားနို့မကြိုက်တတ်တဲ့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကို အဓိကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒိန်ချဥ်ထဲကို သကြားတွေ အလွန်အကျူးထည့်ပြီး တိုက်တာမျိုး၊ သကြားဓာတ်အများအပြားပါဝင်တဲ့ဒိန်ချဥ်တိုက်ကျွေးတာမျိုးတွေကတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဒိန်ချဥ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာလည်း လတ်ဆတ်ဖို့၊ အဆီဓာတ်နဲ့သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပါးဖို့ကို အဓိကဦးစားပေးရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မေမေတို့ကို အကြံပေးပါရစေ။
တူနာငါးက သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ငါးတွေမှာပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ အိုင်အိုဒင်းနဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေက သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးကို ကောင်းကောင်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လတ်ဆတ်ဖို့ အာမခံချက်မရှိတဲ့ တူနာငါးသေတ္တာတွေကိုတော့ တစ်ပတ်မှာ (၂) ကြိမ်ထက်ပိုမကျွေးမိအောင် မေမေတို့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
ကနဦးမှာ ဥတွေက ကိုလက်စထရောအများအပြားပါဝင်တယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဘဲဥနဲ့ကြက်ဥတွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးက လက်ခံထားကြရပါပြီ။ ဥမှာ ပရိုတိန်းဓာတ်၊ သံဓာတ်တို့အပြင် အခြားသောဗီတာမင်ဓာတ်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ကိုလက်စထရောဓာတ်လည်း ပါဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် အဆီပါဝင်မှုနှုန်းက အလွန်အမင်းများပြားတာမျိုးမရှိတာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို နေ့စဥ်ကျွေးမွေးသင့်တဲ့ အစားအသောက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မေမေတို့ကို အထူးတလည်ပြောပြနေစရာတောင် မလိုအပ်တဲ့ အစားအစာပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုတာက ကလေးငယ်တွေအတွက်အပြင် မေမေ၊ ဖေဖေတို့အတွက်ပါ မရှိမဖြစ် စားသုံးပေးသင့်တဲ့အရာဖြစ်ပေမယ့် သားသားမီးမီးတို့က ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ပြောင်းဖူး၊ မုန်လာဥ၊ ပဲနဲ့အာလူးတို့ကိုတော့ သားသားမီးမီးတို့ အမှန်တကယ်သဘောကျပါလိမ့်မယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသား မုန်လာဥမှာဆိုရင် အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုသာ မှန်မှန်စားသုံးပေးသွားမယ်ဆိုရင် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အသားအရည်တွေက ဝင်းလက်တောက်ပနေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
သားသားမီးမီးတို့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ နေကြာစေ့စားတဲ့အကျင့်က မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုလို့ မေမေတို့က ယူဆနိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာတော့ နေကြာစေ့က ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့က နေကြာစေ့အခွံတွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ် လက်လွတ်စပယ်ပစ်မချရဘူးဆိုတာကို သိနားလည်လာတဲ့အရွယ်တွေမှာ နေကြာစေ့ကို စနစ်တကျကျွေးသင့်ပြီး နေကြာစေ့မှာပါဝင်တဲ့ Polyunsaturated နဲ့ Monounsaturated အဆီတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်တဲ့အဆီတွေဖြစ်သလို နေကြာစေ့ထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွှတ်တဲ့အဆီပါဝင်မှုနှုန်းလည်း နည်းပါးတာကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ကို စနစ်တကျ ကျွေးသင့်တဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Previous articleတာဝန်ကျေပွန်သော မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ ကူညီပေးနိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ချို့
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ဖောယောင်ခြင်းကို ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်မလဲ
ကလေးဘဝအဝလွန်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၃) ချက်
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက် ပိုက်ဆံဘယ်လိုစုမလဲ ???
Mom and Baby151
သင်သိထားဖို့လိုတဲ့ ကလေးဘဝ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ
Nandar Lwin - July 29, 2020 0